FrameRate (FPS) ဆိုတာဘာလဲ? – DigitalTimes.com.mm
164 Shares 495 Views
FrameRate (FPS) ဆိုတာဘာလဲ?
Framerate ဆိုတာကတော့ မီဒီယာ specification ပိုင်းမှာ တော်တော်များများနားလည်မှုလွဲကြတဲ့ အသုံးလေးပါ။ ဒါလေးအကြောင်းကို DigitalTimes ရဲ့ Features ကဏ္ဍလေးကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Framerate ဆိုတာကတော့ FPS (Frames Per Second) လို့လည်း သိကြပြီးတော့ တစ်စက္ကန့်မှာ ဗီဒီယို၊ရုပ်ရှင်၊ဂိမ်းတွေကို screen ပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့ frames အရေအတွက်ပါ။ Frame များလေလေ animation ပိုချောမွေ့လေလေပါ။ framerate ပေါင်း အမျိုးမျိုးရှိနေပြီး သူတို့ထဲကအနည်းစုကတော့ gaming standard မီတဲ့ framerates တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် framerate နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆို framerate standard တွေကြား ဘာတွေကွာဟချက်တွေရှိသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Animation ကတော့ frame အရေအတွက်အနည်းဆုံးပါပဲ။ သူ့မှာပါတဲ့ frames တွေကိုတော့ “keyframe” လို့ခေါ်ပြီး frame နည်းပေမယ့်လည်း animation ကို သွက်သွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ fps များလေ ပိုချောမွေ့လေ (သွက်လေ) လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း 12FPS ထားထားတဲ့ animation ထက် 24fps animation က ပိုသွက်နေမှာပါ။
Film (24 FPS, 48 FPS)
ရုပ်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ 24 FPS က ပရိုဂျက်တာရုပ်ရှင်တွေအတွက် စံထားထားတဲ့ပမာဏပါပဲ။ ဂိမ်းတွေဆိုရင်တော့ 24FPS လောက်နဲ့တော့ ဆော့လို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းဆို ဂိမ်းတွေအတွက်ပဲလာတဲ့ framerate တွေကို ရုပ်ရှင်တွေမှာပါ သုံးလာနိုင်အောင်နည်းပေါင်းများစွာနဲ့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ framerate နည်းတာများတာက ရုပ်ရှင်တွေမှာ (motion-blur) ဘယ်လိုကွာသွားလဲဆိုတာကို အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင်က ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပီတာဂျက်ဆန်နဲ့ Ang Lee တို့က ရုပ်ရှင်ရုံတွေရဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကို 48fps ထားဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Television(24 FPS, 60 FPS)
TV တွေလည်း ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ framerate တွေလိုပါပဲ တချို့အရာတွေကို 60 FPS လောက်နဲ့ရိုက်ကူးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူတွေကတော့ framerate နည်းတဲ့ ဗီဒီယိုတွေနဲ့အသားကျလာခဲ့ကြတော့ 60 FPS လောက်ထားလိုက်တာကိုက အရမ်းကို smooth ဖြစ်သွားသလို သဘာဝလွန်သွားသလိုလို ခံစားမိစေမှာပါ။
Gaming (30+ FPS, 60+)
လက်ရှိအပြောများဆုံး အရေးပါဆုံးက ဂိမ်းတွေရဲ့ framerate ပါ။ ဂိမ်းတွေရဲ့အရင်ခေတ်တုန်းက 60 FPS ဆိုတာက စံနှုန်းပါ။ ဂိမ်း console တွေခေတ်တုန်းကတော့ PS3 တို့ 360 တို့မှာဆို ဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်ကိုများများမြှင့်ချင်ပေမယ့်လည်း frame စံနှုန်းကိုက 30fps ပဲရှိနေတဲ့အတွက် developer တွေအတွက် အခက်တွေ့ရပါတယ်။
ဂိမ်းမှာအရေးပါဆုံးက reaction မြန်ဖို့နဲ့ အသွားအလာလှုပ်ရှားမှုတွေ ချောမွေ့နေဖို့က အဓိကပါပဲ။ framerate နည်းတာက ဂိမ်းဆော့နိုင်စွမ်းကိုလည်း ကျစေသလို အထူးသဖြင့် အမြန်ပြေးရတာတွေ အက်ရှင်ဂိမ်းတွေအတွက်ဆို ဆော့ရတော်တော်အဆင်မပြေတာပါ။
Framerate များတာက ဂိမ်းမှာဘယ်လောက်တောင်အရေးပါလဲဆိုတာ အောက်ကဗီဒီယိုကို ကြည့်ရင် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ framerate များများနဲ့ဆိုရင် အရမ်း smooth ဖြစ်ပြီးနည်းရင်တော့ ထစ်နေသလိုမျိုး ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်မြင်မှာပါ။
VR ရဲ့ စံ framerate နှုန်းက 90 ပါ။ ဒီထက်နည်းရင်တော့ motion ပိုင်းမှာ ကြည့်ရတာဒုက္ခရောက်မယ့်အပြင် လက်ရှိ VR နည်းပညာကိုလည်း ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု VR တွေ ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ ပိုမြင့်တဲ့ frames တွေနဲ့သာ ဦးတည်သွားနေတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာဆို အများဆုံး HFR (high framerate) စံနှုန်းက 144HZ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကတော့ လတ်တလောနယ်ပယ်မှာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ framerate ပမာဏတွေအကြောင်းပါ။ လာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့ ဘယ်လိုတွေတိုးတက်လာဦးမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
Framerate ဆိုတာကတော့ မီဒီယာ specification ပိုငျးမှာ တျောတျောမြားမြားနားလညျမှုလှဲကွတဲ့ အသုံးလေးပါ။ ဒါလေးအကွောငျးကို DigitalTimes ရဲ့ Features ကဏ်ဏ္ဍလေးကနေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Framerate ဆိုတာကတော့ FPS (Frames Per Second) လို့လညျး သိကွပွီးတော့ တဈစက်ကနျ့မှာ ဗီဒီယို၊ရုပျရှငျ၊ဂိမျးတှကေို screen ပျေါမှာဖျောပွတဲ့ frames အရအေတှကျပါ။ Frame မြားလလေေ animation ပိုခြောမှလေ့လေပေါ။ framerate ပေါငျး အမြိုးမြိုးရှိနပွေီး သူတို့ထဲကအနညျးစုကတော့ gaming standard မီတဲ့ framerates တှနေဲ့ယှဉျလိုကျရငျ framerate နညျးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါဆို framerate standard တှကွေား ဘာတှကှောဟခကျြတှရှေိသလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ…
Animation ကတော့ frame အရအေတှကျအနညျးဆုံးပါပဲ။ သူ့မှာပါတဲ့ frames တှကေိုတော့ “keyframe” လို့ချေါပွီး frame နညျးပမေယျ့လညျး animation ကို သှကျသှကျအလုပျလုပျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ fps မြားလေ ပိုခြောမှလေ့ေ (သှကျလေ) လို့ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျး 12FPS ထားထားတဲ့ animation ထကျ 24fps animation က ပိုသှကျနမှောပါ။
ရုပျရှငျတှအေတှကျကတော့ 24 FPS က ပရိုဂကျြတာရုပျရှငျတှအေတှကျ စံထားထားတဲ့ပမာဏပါပဲ။ ဂိမျးတှဆေိုရငျတော့ 24FPS လောကျနဲ့တော့ ဆော့လို့အဆငျမပွပေါဘူး။ ခုနောကျပိုငျးဆို ဂိမျးတှအေတှကျပဲလာတဲ့ framerate တှကေို ရုပျရှငျတှမှောပါ သုံးလာနိုငျအောငျနညျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ကွိုးစားနကွေပါတယျ။ framerate နညျးတာမြားတာက ရုပျရှငျတှမှော (motion-blur) ဘယျလိုကှာသှားလဲဆိုတာကို အောကျကဗီဒီယိုကိုကွညျ့ရငျသိနိုငျပါတယျ။
သိပျမကွာသေးခငျက ရုပျရှငျဖနျတီးသူတှဖွေဈကွတဲ့ ပီတာဂကျြဆနျနဲ့ Ang Lee တို့က ရုပျရှငျရုံတှရေဲ့စံနှုနျးသတျမှတျခကျြကို 48fps ထားဖို့လုပျဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။
TV တှလေညျး ရုပျရှငျတှရေဲ့ framerate တှလေိုပါပဲ တခြို့အရာတှကေို 60 FPS လောကျနဲ့ရိုကျကူးလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ လူတှကေတော့ framerate နညျးတဲ့ ဗီဒီယိုတှနေဲ့အသားကလြာခဲ့ကွတော့ 60 FPS လောကျထားလိုကျတာကိုက အရမျးကို smooth ဖွဈသှားသလို သဘာဝလှနျသှားသလိုလို ခံစားမိစမှောပါ။
လကျရှိအပွောမြားဆုံး အရေးပါဆုံးက ဂိမျးတှရေဲ့ framerate ပါ။ ဂိမျးတှရေဲ့အရငျခတျေတုနျးက 60 FPS ဆိုတာက စံနှုနျးပါ။ ဂိမျး console တှခေတျေတုနျးကတော့ PS3 တို့ 360 တို့မှာဆို ဂရပျဖဈစှမျးရညျကိုမြားမြားမွှငျ့ခငျြပမေယျ့လညျး frame စံနှုနျးကိုက 30fps ပဲရှိနတေဲ့အတှကျ developer တှအေတှကျ အခကျတှရေ့ပါတယျ။
ဂိမျးမှာအရေးပါဆုံးက reaction မွနျဖို့နဲ့ အသှားအလာလှုပျရှားမှုတှေ ခြောမှနေ့ဖေို့က အဓိကပါပဲ။ framerate နညျးတာက ဂိမျးဆော့နိုငျစှမျးကိုလညျး ကစြသေလို အထူးသဖွငျ့ အမွနျပွေးရတာတှေ အကျရှငျဂိမျးတှအေတှကျဆို ဆော့ရတျောတျောအဆငျမပွတောပါ။
Framerate မြားတာက ဂိမျးမှာဘယျလောကျတောငျအရေးပါလဲဆိုတာ အောကျကဗီဒီယိုကို ကွညျ့ရငျ ကှငျးကှငျးကှကျကှကျကိုသိပါလိမျ့မယျ။ framerate မြားမြားနဲ့ဆိုရငျ အရမျး smooth ဖွဈပွီးနညျးရငျတော့ ထဈနသေလိုမြိုး ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျမွငျမှာပါ။
VR ရဲ့ စံ framerate နှုနျးက 90 ပါ။ ဒီထကျနညျးရငျတော့ motion ပိုငျးမှာ ကွညျ့ရတာဒုက်ခရောကျမယျ့အပွငျ လကျရှိ VR နညျးပညာကိုလညျး ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အခု VR တှေ ဂိမျးကုမ်ပဏီတှကေတော့ ပိုမွငျ့တဲ့ frames တှနေဲ့သာ ဦးတညျသှားနတောဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျမှာဆို အမြားဆုံး HFR (high framerate) စံနှုနျးက 144HZ ဖွဈပါတယျ။ ဒါတှအေားလုံးကတော့ လတျတလောနယျပယျမှာ လှမျးမိုးထားတဲ့ framerate ပမာဏတှအေကွောငျးပါ။ လာမယျ့အနာဂတျမှာတော့ ဘယျလိုတှတေိုးတကျလာဦးမလဲဆိုတာ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရမှာပါပဲ။
MWC ပွဲမှာမိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့ 18:9 screen Nokia7Plus (Android One) နဲ့ Nokia 1(Android Go)